Tag: Ubuntu | देखाउनुहोस् शीर्ष
सक्छ 27, 2019
कसरी गर्ने VirtualBox कुनै टिप्पणी BISH Jaishi
कसरी VirtualBox मा उबुन्टु लिनक्स हार्ड डिस्क ड्राइभ मूल विभाजन विस्तार गर्न?
तपाईं VirtualBox मा उबुन्टु लिनक्स मा अन्तरिक्ष को बाहिर चलिरहेको छन् भने तपाईं विभाजन पुन आकार त्यसपछि हार्ड डिस्क आकार वृद्धि र गर्न आवश्यक हुनेछ. कसरी यसो गर्न निम्न देखाउने. म 8Gb एक हार्ड डिस्क आकार छ, जो एक उबुन्टु वीएम छ. म आकार वृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ…
अगस्ट 24, 2015